Amakhambi neMpilo e-Afrika
PIs:u- Alex Broadbent, uZinhle Mncube, uLikhwa Ncube no Ben Smart
U-Gifford (2011:1) uchaza ifilosofi yamakhambi njengegatsha “eliqukethe izihloko ezixhumene nefilosofi yesayensi evela ngokubheka kusayensi yezokwelapha nokwenza.” Okusho ukuthi, amafilosofa kufilosofi yamakhambi anakana nemibuzo efana nale, yini impilo? Singasiqonda kanjani isifo? Singahlola kanjani ubufakazi bezokwelapha? Kwezamakhambi nezempilo ephrojekthini yaseNingizimu Afrika, sibheka le neminye, ehlala njalo ingabhekwa. Izinhlobo zemibuzo kufilosofi yamakhambi ngemibono, ngemiqondo nangemibono evela kungqikithi yethu yase-Afrika.
Izinhlelo Zomdabu Zolwazi
PIs: uMongane Serote noLikhwa Ncube
Le phrojekthi imayelana nokuthuthukiswa kwe-IKS Portal. Ukuyiqala, uMongane udinga ukungena ekuqiniseni nasekufakazeni lokho akubize ngezigaba ze-IKS. Zona: Izindaba zokuhlalisana ze-IK, izikhungo, ubuchwepheshe, ukwahlukana kwezitshalo nezilwane nokufunwa kwezinhlobo zezitshalo nezezilwane ukwenza amakhambi bese ekugcineni, izinqubo zenkululeko. Ngenkathi eseyi-CEO yase-Freedom Park, wasungula futhi wenza ukuvela komqondo wophiko lokuchamusela nokuqamba kabusha i-IKS lokho acabanga ukuthi kufanele kuqhutshekwe ngokuyithuthukisa. Inhloso yakhe ukubuye ayisebenzise njengephuzu lenkomba.
PIs: u-Chad Harris, uVeli Mitova noLikhwa Ncube
Le phrojekthi igxile ezinhlotsheni ezimbili zezindaba zokuhlolwa kwesimo kuMfundolwazi – ubuhlakani namandla olwazi. Ingxenye yobuhlakani yephrojekthi iqhathanisa Ubuhlakani Besayensi neZinhlelo Zomdabu Zolwazi. Kakhulu, ibuzisisa umcabango wokuthi kukhona ukungqubuzana okunamandla phakathi kolwazi lomdabu nolwase-Afrika yamanje nokubuka umhlaba ngokwesayensi. Ingxenye yokweswela ubulungisa ngolwazi kwephrojekthi izimisele ukuhlanganisa izihloko zezindaba ezisemqoka ezinkulumweni ezintathu zamanje kumfundolwazi – ukuba nesibopho, ukungazi nokweswela ubulungisa kolwazi.